Adam Lallana Oo Warbaahita Lawadaagay Waxa Uu Sameeyo Tababare Jurgen Klopp Marka Uu Careysan Yahay | Ciyaarside.com
Adam Lallana Oo Warbaahita Lawadaagay Waxa Uu Sameeyo Tababare Jurgen Klopp Marka Uu Careysan Yahay
“Xaqiiqo ahaan luqadiisa Ingariiska aad ayay u fiican tahay. Waan fahmaa wax walba uu u baahan yahay ama waxa uu doonayo inuu igu yiraahdo. Waa uu kugu canaan karaa, waana uu kugu amaani karaa. Hab siintiisa waa mid runtii dhab ka ah.
“Wuu ku sheegayaa marka uu kugu faraxsan yahay, wuuna ku sheegayaa marka uusan ku faraxsaneyn, waa nin toosan oo aan laablaab laheyn.
“Ma qarin karo dareenkiisa, miyaysan aheyn? Haddii uu doonayo inuu wax yiraahdo wuu ku sheegayaa. Waxa uu yiraahdaa waan noqon karaa saaxiibkaa laakiin la noqon karo saaxiibkaaga kuugu fiican sababtoo ah waxa uu ku qasban yahay inuu mararka qaar hadalo kulul ku yiraahdo. Mararka qaar wuu xanaaqaa isagoo inoo sheegaya inaanan aaminsaneyn sida aan u fiicanahay.”
Liverpool ayaa isbuuca soo socda waxa ay la ciyaari doonaan kooxda Southampton iyagoo ku jira kaalinta shanaad ka dib 11 kulan oo la ciyaaray, waxaana ay durbaba 12 dhibcood ka danbeeyaan kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.